၎သိန်း၇သောင်း㎡ကျယ်ပြန့် တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ၄သိန်း၇သောင်း㎡ကျယ်ပြန့် တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး
Hein Pyae Phyo က ကွာသပတေးနေ့, 09/01/2016 - 14:59 အခြိနျတှငျ ရေးခဲ့၏
Select ratingGive ၄သိန်း၇သောင်း㎡ကျယ်ပြန့် တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး 1/5Give ၄သိန်း၇သောင်း㎡ကျယ်ပြန့် တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး 2/5Give ၄သိန်း၇သောင်း㎡ကျယ်ပြန့် တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး 3/5Give ၄သိန်း၇သောင်း㎡ကျယ်ပြန့် တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး 4/5Give ၄သိန်း၇သောင်း㎡ကျယ်ပြန့် တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး 5/5
ဖုခုအိုက တောင်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ( Moo moo Land ) ဟာ ဖုခုအိုက မြို့ နယ် က စီမံ နေတဲ့ မွေးမြူ ရေး ခြံကြီး ဖြစ် တဲ့ အတွက် ၀င်ကြေး အခ မဲ့ သွားရောက်လည် ပတ် နိုင် ပါတယ်။ ခြံ ကြီးး ရဲ့ အကျယ် ကတော့ ၄သိန်း ၇ သောင်း ၅ထောင် ဟဲဟိုး မီတာ ရှိပြီး ၊ ပတ်ပတ် လည် တော ရဲ့ အကျယ် ကတော့ ၂၀ သန်း ဟဲဟိုးမီတာ ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆက် တဲ့ လေ ကို ရှူ ရှိုက် ကာ တိရိစ္ဆာန် လေးတွေ နဲ့ ထိတွေ့ ရင်း မိသားစု တွေ လာရောက် အပန်း ဖြေ နိုင်ပါတယ်။ တကယ့် ကို မြို့ ပြ နဲ့ အနီး ဆုံး နေရာ မှာ ရှိ တဲ့ သဘာဝ ရဲ့ အရသာ ကို ခံ စား နိုင် တဲ့ နေရာတစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးလေး က နွားလေး ကို အစာကျွေးနေတဲ့ပုံလေး ပါ။
ရာသီဥတု ကောင်းမွန်တဲ့ နေတွေ မှာ ဆို ရင် တိရိစ္ဆာန် လေး တွေ က လွင်ပြင် ကျယ်ကြီး ထဲ မှာ လျှောက်သွား နေတာတွေ ၊ အစာရှာ တာတွေ လုပ်တဲ့ အတွက် တိရိစ္ဆာန် လေး တွေ နဲ့ ထိတွေ့ လို့ လဲ ရပါတယ်။
ဆိတ်လေး နဲ့ မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ကြည့်ရအောင်။
(moo moo land ) မွေး မြူ ရေး ခြံ တွင် ၊ နွား ၊ မြင်း၊ ဆိတ် ၊ သိုး ၊ ငှက် ၊ ကြက် အစရှိ သည် တို့ အပြင် ယုန် ငယ်လေး တွေ ကို လဲ မွေး မြူ ထား ပါတယ်။
ကလေး များ ကစားရန်နေရာ
(moo moo land ) မှာ ကတော့ တိရိစ္ဆာန် လေး တွေ တင် မက ပဲ ကလေး လူကြီး မရွေး ပျော် ရွှင် စွာ ဆော့ ကစား နိုင် တဲ့ နေရာ တစ်ခု လဲ ရှိပါသေးတယ်။
ရိုလာ စလိုက် ဒါ
အမြင့် ၁၀ မီတာ အရှည် ၄၈ မီတာ ရှိ တဲ့ ရိုလာလျောစီးစင် က တည် ရှိ ပြီး လျှော စီး ရင်း အောက် က မြို့ အလှ ကို တ၀ကြီး ကြည့် လို့ ရပါသေး တယ်။
လူငယ်တို့ လဲ လာရောက်ကြပါတယ်။
ကလေး ငယ်လေး တွေ တင် မက ပဲ လူငယ်စုံတွဲလေးတွေ ပါ ဒိတ်လုပ်လို့ ကောင်းမယ့် နေရာလေး တစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Moo moo Land မှာ ဆို ရင် နို့စား နွား များ ကို သဘာဝ့ ပတ် ၀န်း ကျင် ကြီး ကြား မှာ မွေး မြူ ထား ပါတယ်။ နွားလေး တွေ ကို အစာ ကျွေး တာ တို့ ပြီး တော့ နွားနို့ ညှစ်ခြင်း အတွေ့ အကြုံ ကို လဲ လေ့ လာလို့ ရပါတယ်။ နို့ နှင့် နိုး ထွက် ပစ္စည်း စက်ရုံ တွင် ထော ပတ် အစရှိ သည် တို့ ကို ပင် ထုတ် လုပ် ရောင်း ချလျက် ရှိပါတယ်။
နွားနို့ ညှစ် ခြင်း
Moo moo Land မွေးမြူ ရေး ခြံ မှာ ဆို ရင် နို့ ညှစ် ခြင်း အတွေ့ အကြုံ ကို ယူ လို့ ရပါတယ်။ ရလာ တဲ့ နွား နို့ ကို တော့ စက် ရုံ ထဲ မှာ နို့ နှင့် ထောပတ် အစရှိသည် တို့ ပြု လုပ်ပါတယ်။
● နေ့စဉ် လူ ၅၀ အထိ
●လက်ခံ မနက် ၉ နာရီကနေ ( လမ်းညွှန်ဌာန တွင် မေး ပါ)
မြင်းစီးရန် စောင့်နေတဲ့ သားအဖတွေ
ရှေ့က နေ မြင်းထိန်း က ဆွဲ ပေး ခြင်း ဖြစ် တဲ့ အတွက် အန္တရာယ် မရှိ နိုင် ပါ။ ၄ နှစ် အထက် စီး ကြည့်လို့ ရပါပြီ။
၁ ပတ် ၅၂၀ယန်း
အလေးချိန် ၄၀ ကီလိုဂရမ် အထိ
●ရာသီ ဥ တု နဲ့ မြင်း တို့ ၏ ကျန်း မာရေး အခြေ အနေပေါ် မူ တည် ပြီးအစီအစဉ် ရပ်နား မှု ရှိသည်။
●လက်ခံချိန် မနက် ၉ နာ ရီကနေ ( လမ်းညွှန် ကောင်တာ တွင်မေးပါ)
အရှေ့ လေ့လာရေး မျှော်စင်ကတော့ ခြံ ရဲ့ အမြင့် ဆုံးနေရာတွေ တည်ရှိပြီး ၊ သဘာဝ ပတ် ၀န်း ကျင် ကို ကြည့် ရှု ရင်း ဖုခုအိုကရဲ့ အလှ ကို ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ ကျူးရှူး ပြည်နယ် ကို အလည်လာ ရင် သေချာပေါက် ဒီ ကိုလာခဲ့ ပါ။
ခြံ ကြီး ထဲ မှာ လည်ပတ် ပြီး လို့ ပင်ပန်း သွား ပြီ ဆို ရင် BBQ ကို သုံး ဆောင်လို့ ရပါသေး တယ်။ မွေး မြူ ရေး ခြံ က ချက်ပြုတ်ရောင်းချ တဲ့ စတိတ် ဟင်း လျာ ၊ အသား နဲ့ အရွက် မျိုး စုံ ကို ၂ ယောက် စာ ၂၀၀၀ ယန်း ခန့် ဖြင့် ရောင်းချ ပေး နေခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုံ ၁၃၆ ခုံ ရှိပြီး အတွင်း ပိုင်း၆၂ ခုံ ရှိပါတယ်။ သဘာဝတောတောင်၊ လတ်ဆက်တဲ့လေ၊ အရသာရှိတဲ့ အစားအစာ အစရှိ တဲ့ ၃ မျိုး ကို တပြိုင် တည်း ခံစားလို့ရပါပြီ။
မွေးမြူ ရေး ခြံ သို့ သွားပုံသွား နည်း
・Via subway: Get off at Fukudaimae Station (Nanakuma Subway Line).
Go through exit number 1 from the station and go to the “Fukudai Seimon-mae” bus stop.
From here, ride the bus going to “Shimin no mori” or “Aburayama Bokujo” and get off at “Aburayama Bokujo.”
(Bus fare is \_210 for adults and \_110 for children.)